Ciyaartoy.com » TC STARS OO KU GUULEYSTAY KOOBKII OHIO 2012
TC STARS OO KU GUULEYSTAY KOOBKII OHIO 2012 Apr 9, 2012 - ujawaab	TC STARS OO KU GUULEYSTAY KOOBKII OHIO 2012
Haddaba waxaa maanta oo ah Axad bisha Abriilna ay tahay 8, ciyaartii kama dambaystii ahayd ku kulmay labadda kooxood ee TC Stars oo ka socda gobolka Minnestoa iyo kooxda Tennessee oo iyagu ka socda magaallada Nashville ee gobolka Tennessee.
Ciyaarta finalka oo ahayd ciyaar aad u culsu ayaa waxaa hal gool la hor martay kooxda TC Stars. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa lagu kala maray, hal gool iyo waxba. Kooxda Tennessee oo car car iyo dadaal dheeraad ah la soo baxay ayaa waxay qaybtii labaad ee ciyaarta ku bilaabeen weerar, balse kooxda TC Stars iyo ciyaartooydooda aadka u da’da yar ayaa iyagu weerar celis iyo kalsooni isku dheeli tiran iskaga caabiyay Tennessee.
Ciyaarta ayaa waxay ku dhamaatay 4-2 oo ay guushu ku raacday Xiddigaha Magaallooyinka Mataanaha ah (TC Stars). Goolasha TC STars waxaa u kali dhaliyey Sheekh Cumar (1 gool), Aamaaye (2) iyo Liibaan yare (1). Kooxda kubadda cagta ee Twin City Stars iyo macalinkiidoa Carab ayaa iyagu sanadkii 2010-ka horay ugu guulaysatay koobka cayaaraha xagaaga oo sannad kastaaba lagu qabto gobolka Ohio (Columbus), ka dib markii cayaartii kama dambaysta ahayd ay 3 gool iyo 1 ku suuldaareen kooxda kubadda cagta ee Midnimo.
Bahda ciyaartoy.com oo u hambalyaynaysa guddiga qabanqaabada tartanka iyo dhamaan ciyaartoyda, macalimiinta iyo bahweynta isboortiga ee iyagu ka qayb galay tartankan. Waxaan idinla soo socod siin doonaa dhamaan sidii loo kala helay billadaha iyo wixii abaal marin ah ee ay guddiga qabanqaabada tartanka ay bixiyeen.
« PreviousMowliid Macaane oo lagu aasay Nairobi	Next »INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEYHI RAAJICUUN	Leave a Reply